Sida Lacag Loogu Sameeyo Istaraatiijiyad Xun Xun? | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyadii Xumaanta Xun
Maqaarku wuxuu soo jiitaa dadka cusub oo leh faa'iidooyin deg -deg ah, gaar ahaan marka laga dhex ganacsado ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah . Maxaa ku jiri doona koontada dhabta ah ee suuqa crypto ? Aynu tusaale u soo qaadanno istiraatiijiyadda “Xumaan -Xumidda”.
Nooca : Isbedelka & Kanaalka
Wakhtiga : Mid kasta oo ka mid ah xadka M1-M5. Xaaladeena, M1 ayaa la isticmaalaa, laakiin iyada oo ay sii kordhayso falanqaynta, saxsanaanta signalada ayaa kordheysa.
Hantida ganacsiga : Wax kasta oo ikhtiyaarro ah ayaa tilmaamaya ganacsiga . Shuruudda ugu weyni waa mid go'an (2-3 dhibcood) oo aan lahayn khidmado qarsoon.
Waqtiga ganacsiga : Dhammaan fadhiyada ganacsiga Forex.
Xulashada qiimaha boqolleyda : Aan ka yarayn 70-75%.
Istaraatiijiyadu waxay isticmaashaa saddex tilmaame oo farsamo:
Kordhinta (EMA) Celceliska Dhaqdhaqaaqa ee leh muddooyinka 14 iyo 35 . Tilmaamayaasha isbeddelka ee aan ku go'aaminno barta furitaanka ee suuqa crypto . Istaraatiijiyaddan looguma talagalin ka ganacsiga inta lagu jiro xilliyada guryaha. Waxaan ka ganacsannaa oo keliya haddii kala-soocgu u dhexeeyo ugu yaraan 15-25 dhibcood!
Bollinger Bands (BB) - jihada toosan ee khadadka BB waxay xaqiijinayaan jiritaanka guri, burburka khadadka ayaa noqon doona astaanta ganacsiga crypto ee dhammaadkeeda. Haddii baaxaddu ay ballaaran tahay, waxaad furi kartaa ikhtiyaarrada si aad uga soo laabato xuduudaha. Habkan waxaa lagula talinayaa kaliya ganacsatada khibrada leh!
MACD (12, 26, 9) . Tilmaamahani wuxuu u shaqeeyaa sidii isbeddel iyo aalad oscillator labadaba, sidaa darteed waxay noqon doontaa astaantii ugu dambaysay si loo furo ikhtiyaar.
Ka dib markaan ku rakibno tilmaamayaasha jaantusyada ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah , waxaan eegeynaa tusaalooyinka calaamadaha:
Calaamadaha Crypto ee maalinta ganacsiga :
UP (WAC) - doorasho . Qiimuhu wuxuu ka sarreeyaa khadka dhexe ee Bollinger iyo EMA. MACD wuxuu ka sarreeyaa heerka eber ama xariiqa ayaa soo baxaya.
DOWN (PUT) - doorasho . Calaamadaha ka soo horjeeda crypto: Qiimuhu wuxuu ka hooseeyaa EMA iyo khadka dhexe ee Bollinger. MACD wuxuu ka hooseeyaa heerka eber, khadadka ayaa hoos u dhacaya.
Dadka bilowga ah waa inay sugaan ugu yaraan 2 qiimayn oo ah MACD histogram -ka si ay uga gudbaan heerka eber kaliya markaa bilaabaan ganacsiga crypto .
Furan ganacsi shumaca soo socda ka dib marka ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ah Wakhtiga uu dhacayo ikhtiyaarradu waa inaysan ka yarayn 15-20 daqiiqo xitaa haddii waqtiga shaqada loo doorto 5 daqiiqo, sida fiidiyahayaga.
Talooyinka ku saabsan adeegsiga…
Bitcoin waxay saldhig u noqon doontaa istiraatiijiyad kasta oo suuqa crypto ah . Lacagaha kale ayaa soo raaca, in kasta oo dib u dhac ku yimid. Marka laga reebo Ethereum - waxaa jira dib -u -dhacyo iyo sixitaanno iska soo horjeeda. Tani badanaa waa kiiska marka la daabacayo dhacdooyin muhiim ah oo ku saabsan lacagta, falalka mala-awaalka ah waa kuwo gaaban oo ku dhawaad ma dhacaan.
Kadib isbeddel xoog leh, MACD, sida oscillator -ka kale, wuxuu ku dhegi karaa muddo dheer meelaha muhiimka ah ama u dhow heerka eber, isagoo aan ka tallaabin. Isla mar ahaantaana, EMA waxay siin kartaa calaamado xoog leh xulashooyinka furan. Haddii la aqbalo iyo in kale, gaar ahaan calaamadaha bitcoin , ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah, waxay ku xiran tahay qof walba inuu go'aansado naftiisa. Wali way u fiican tahay kuwa bilowga ah inay sugaan barta gelitaanka oo si buuxda loo sameeyay.
Haddii dillaaliyuhu siiyo ikhtiyaarka ah inuu xirmo kahor taariikhda dhicitaanka, waan sameynaa (xitaa haddii ay macaash ku jirto!) Marka calaamadaha ka soo horjeedda ee crypto ay soo baxaan - soo noqnoqosho soo noqnoqosho ah oo Celceliska Dhaqaaqa leh isbeddel degdeg ah ama qaraabo ah xagga jihada Taariikhda MACD.
Aan soo koobno.
Ku xoqitaanka ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee lacagta dhijitaalka ah waxay keeni kartaa faa'iidooyin deggan xitaa tilmaamayaasha farsamo ee caadiga ah. Shuruudda ugu weyni waa dillaaliyeyaasha crypto inay fuliyaan amarada ganacsiga oo leh dib -u -dhac ugu yar. Istaraatiijiyaddan waxaa loo adeegsan karaa daqiiqad kaliya, laakiin sidoo kale waqtiyada M5-M15.